निःशुल्क नि यै मलाई पोषिलो नि यै
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा निःशुल्क भोजन प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ । केही महिनादेखि सुरु गरिएको भोजन कार्यक्रमबाट गरिबहरू लाभान्वित भइरहेका छन् ।
धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका हारसरका राजकुमार साहले भने पहिला भोजन नदिँदा बाहिर जानुपथ्र्यो, बाहिर भोजन गर्दा पैसा पनि लाग्ने र पोषिलो पनि नभएकाले निकै समस्या हुने गथ्र्यो । तर, अहिले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा निःशुल्क भोजन दिइँदा हामीलाई राहत भएको उनले अगाडि बताए ।
बिहान ११ बज्नेवित्तिकै ई–रिक्सामा बिरामीहरूका लागि भोजन आइपुग्छ । रोगीहरू तथा उनीहरूका कुरुवा प्लेटमा भोजन लिन थाल्छन् । फेरि यस्तै रुटिन राती ८ बजेको पनि हुन्छ ।
होटल व्यवसायी सञ्जय साहले पानी परोस् वा अत्यधिक जाडो होस्, खाना लिएर पुग्नै पर्ने बताउँछन् । साहलाई अस्पतालले रोगीहरूलाई भोजन गराउने जिम्मा दिइएको छ ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामले भोजनका लागि ५० रुपैयाँ प्रति प्लेट होटल व्यवसायीलाई दिने गरेको छ । रोगीको भोजनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्षिक १३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । १३ लाख रुपैयाँले रोगीहरूको भोजन सहज ढंगले भइरहेको अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. रामनरेश पण्डितले बताए ।
भोजनका लागि ५० रुपैयाँ प्रति प्लेट कम भए पनि समाजसेवा र व्यवसाय दुवै भएकाले आफूलाई कुनै गुनासो नरहेको होटल व्यवसायी सञ्जयले बताए ।
२० वर्ष अगाडि उक्त अस्पतालमा रोगीहरूलाई निःशुल्क भोजन दिइने गरिन्थ्यो तर अस्पतालमा भोजन बनाउन कुनै मेस सञ्चालकले मानिरहेका थिएनन् । त्यस कारण केही वर्षदेखि भोजन कार्यक्रम बन्द रहेको थियो । निःशुल्क भोजनका लागि आउने ३ लाख रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुने गर्थ्यो ।
अस्पताल सुधारमा काम गरिरहेका असहाय संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वैद्यनाथ साहको दबाबमा निःशुल्क भोजन पुनः सुरु गरिएको छ । साहले सुरुमा स्थानीय दाताहरूलाई खोजी गरी केही दिन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको पछि अस्पतालमा रहेको ३ लाख रुपैयाँको बजेटलाई उपयोग गरिएको अस्पतालका कर्मचारीहरू बताउँछन् । पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा बजेट थपेको साहले जानकारी दिए ।
अहिले प्रत्येक दिन १ सय जना निःशुल्क भोजन गरिरहेका छन् । समरिना खातुन आफ्नो छोरालाई लिएर अस्पताल आएकी छन् । उनले गत ४ दिनदेखि अस्पतालकै निःशुल्क भोजनले आफू र छोरा दुवैको पेट भर्ने गरेको सुनाइन् ।
दुःखी खत्वेले पनि यो भोजनले धेरै राहत भएको बताए । रोगीका लागि भोजन भएकाले यसमा धेरै पिरो वा तेल भएको जस्तालाई ख्याल गरिन्छ । भोजनमा भात, दाल, साग र तरकारी दिइने गरिन्छ ।
भोजन गुणस्तर छ वा छैन, त्यसको अस्पतालले अनुगमन पनि गर्ने गर्छ । अस्पताल चाँडै क्यान्टिन व्यवस्थापनमा पनि लागेको छ । बाहिरबाट भोजन ल्याउनु भन्दा अस्पतालमै क्यान्टिन खोल्नतर्फ लागेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सञ्जय सिंहले बताए । क्यान्टिनका लागि प्रदेश २ सरकारले २८ लाख रुपैयाँ अस्पताललाई दिएको छ । यस आर्थिक वर्षभित्रै आफ्नै क्यान्टिनमा भोजन बनाई रोगीलाई सुविधा दिइने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने योजना
जनकपुरधाममा रहेका प्रादेशिक अस्पताललाई केही महिनाभित्रै सुविधा सम्पन्न बनाइने प्रदेश २ सरकारले जनाएको छ । जनकपुरधाम अञ्चल अस्पतालबाट केही दिनअघि स्तरोन्नति गरी प्रादेशिक अस्पताल बनाएको यस अस्पताललाई नमुना अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
प्रदेशकै जेठो अस्पतालको रूपमा रहेको यस अस्पताललाई आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिने प्रक्रियासमेत सरकारले सुरु गरिसकेको जानकारी प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यहाँ मेडिकल कलेजको पढाइसमेत गराउने योजना रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए ।
२०७६/०७७ को बजेटमा अस्पताललाई नमुना बनाउन प्रदेश सरकारले २३ करोड रुपैयाँ यसअघि नै विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले अस्पताललाई नमुना बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास गरी आवश्यक यन्त्र, उपकरण जडान गरिने तयारी भइरहेको छ ।
२०२६ सालमा स्थापना भएको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा सरकारले १ सय शैय्याको स्वीकृति दिएको छ भने अस्पताल विकास समितिले १ सय ५ शैय्या सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यहाँ धनुषा, महोत्तरी, सिन्धुली, सर्लाही, सिरहा र उदयपुरसम्मका रोगीहरू उपचार गराउन आउँछन् । केही वर्षदेखि रेफर अस्पताल बनेको यस अस्पतालको सुधार गर्नुपर्ने माग वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ ।
अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष कामेश्वर झा भन्छन्, ‘अस्पताललाई सुधार गर्नै पर्छ । अहिलेको अवस्थामा यो आफैँ बिमार छ भने यसले अरूको उपचार कहाँबाट गर्छ ?’
जो मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट वा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष आउँछन्, आफ्ना नातागोतालाई कर्मचारीमा नियुक्त गरिदिने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ । ‘अस्पताल सुधार्नमा कोही गाम्भीर्य देखाउँदैन । अस्पताललाई सुधार गर्न शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ’, युवा नेता सरोज मिश्र भन्छन् ।
नेपाल सरकारले अस्पतालमा ४५ जना चिकित्सकको दरबन्दी तोके पनि अहिले ५ जना मात्र कार्यरत छन् । सरकारले तोकेको दरबन्दीअनुसार अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सकको पद रिक्त रहेको मेडिकल सुपरिटेन्डेट डा. नागेन्द्र यादवले बताए ।
अस्पतालमा ११औँ तहका १० जना चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि अन्य सम्पूर्ण पद रिक्त छन् । केहीलाई विकास समितिबाट तलब दिएर राखिएको छ तर त्यो पनि पर्याप्त छैन । अस्पतालमै काम गर्नेहरू अस्पतालभन्दा क्लिनिकका लागि दलाली गरिरहेका स्थानीय बताउँछन् ।
‘अब त्यस्तो केही हुँदैन । हामीले परिवर्तन गरेर देखाउँछौँ’, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री यादव भन्छन् । प्रदेश सांसद रामआशिष यादवले जनकपुर अञ्चल अस्पतालको सुधार हुनेमा आफू पनि आशावादी रहेको बताए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २४, २०७६, ०९:०१:००